အသည်းနှင့် အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
The Liver and Digestive Institute Building 1, 2nd Floor
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၈:၀၀ - ၁၈:၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၈၂၂-၃
Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့ အသည်းနှင့် အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံဟာ ထိုင်းလူမျိုးတွေအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လာရောက်အခြေချ နေထိုင်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက လူနာတွေကို အသည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေသာမက အစာခြေအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေကို အဆင့်အမြင့်ဆုံး ရောဂါရှာဖွေမှုနဲ့ ကုသမှုတွေပေးဖို့ အပြည့်အဝအသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးခန်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လေးစားအခံရဆုံး ဆေးရုံကြီးတွေထဲက တစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းနှင့် အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းကို အထူးကျွမ်းကျင်ပြီး ဗိုင်းရက်စ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရက်စွဲရောဂါ (alcoholism)၊ အသည်းခြောက်ရောဂါ (cirrhosis), အသည်းအဆီဖုံးခြင်း (fatty အသည်း)၊ ပန်းကရိယရောင်ခြင်း (pancreatitis)၊ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း (gallstones) နဲ့ အခြားနာမကျန်းမှုများစွာတို့လို အသည်းတွင်သာမက အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းစနစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက်ပါ ရောဂါရှာဖွေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစပြီး ကုသတဲ့အထိ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ Samitivej ဟာ ခေတ်အမီဆုံးနဲ့ ကျွမ်းကျင်အဆင့် ပြုစုကုသမှုဖြစ်တဲ့ အသည်းအစားထိုးခြင်းလို ကုသမှုမျိုးမှာလဲ အထူးကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသည်းအစားထိုးကုသမှုတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်းဟာ ၉၀% အထက်မှာရှိပြီးတော့ လူနာအများစုဟာ ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာက သက်သာလာပြီးနောက်မှာ သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အူမကြီးကင်ဆာအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ဖို့နဲ့ စောလျှင်စွာ သိရှိနိုင်ဖို့ အားပေးတဲ့နေရာတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ထားပါတယ်။ ဆက်လက် လေ့လာရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီးဟာ ဂျပန်ဆေးရုံကြီး SANO နဲ့ ပူးတွဲအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အသည်းနှင့် အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းကို အထူးကျွမ်းကျင်ပြီး အသည်းနဲ့ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းစနစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက် ရောဂါရှာဖွေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစပြီး ကုသတဲ့အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ ဒီဆေးရုံကြီးနှစ်ရုံဟာ ဆေးပညာဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်း စတင်ထားပြီး ဒီအစီအစဉ်ကြောင့် Samitivej ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက သူတို့နဲ့ နယ်ပယ်တူ ဆရာဝန်တွေဆီကနေ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေကို လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
SANO ဆေးရုံကြီးက Samitivej ဆေးရုံကြီးကို လက်တလောမှာ မိတ်ဆက်ပေးထားတာကတော့ ဝမ်းတွင်း သွေးကြောစစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ (Narrow Band Imaging) နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာဟာ အသေးစိတ်ပုံရိပ်တွေအပြင် အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာ မပြတ်သားတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်မြင်ရဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစိမ်းနဲ့ အပြာရောင်အလင်းတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ အသစ်တီထွင်လိုက်တဲ့ ပုံရိပ်ကိုချဲ့ကြည့်တဲ့ နည်းလမ်းပါတဲ့ သွေးကြောပုံရိပ်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အူမကြီးရောဂါ အမျိုးအစားခွဲခြားသည့်စနစ် (NICE) ရဲ့ ထိရောက်မှုဟာ တိုးတက်လာတဲ့အတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရစေပါတယ် –
အူမကြီးနှင့် စအိုရောဂါများကို အလုံးအကျိတ်များ မရှိသည့်တိုင်အောင် စောလျှင်စွာ ရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါတယ်
ပိုမိုတိကျတဲ့ ကုသမှုများကို ရရှိစေမယ့် ပိုမိုမှန်ကန်တဲ့ ရောဂါရှာဖွေမှုကို ပေးပါတယ်
ဆေးဝါးကုသမှုတွေကို ပိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ မြန်ဆန်စွာ ကျန်းမာလာစေပြီး ရှုပ်ထွေးမှုတွေလည်း နည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် လူနာတွေအနေနဲ့လည်း ဆေးရုံတက်စရာမလိုတော့ပါဘူး
တကယ်လို့ ပုံမှန် မဟုတ်တာတွေ တွေ့ရှိခဲ့ရင်တော့ အသားစကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ယူပြီးစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် မလိုလားအပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေလည်း မလိုတော့ပါဘူး
ပုံရိပ်ချဲ့စနစ်ပါတဲ့ ဝမ်းတွင်း သွေးကြောစစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ (Narrow Band Imaging) လို ရှုပ်ထွေးတဲ့ နည်းပညာကို ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ ဆရာဝန်မျိုး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သိပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။ Samitivej ရဲ့ အသည်းနှင့် အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆရာဝန်တိုင်းဟာ အခုဆိုရင် ဒီနည်းပညာအသစ်ကို အထူးကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ ပိုပြီးမြင့်မားလာစေတဲ့အတွက် အလွန်ကိုပဲ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ SANO နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်တွဲမှုအကြောင်းကို ထပ်မံလေ့လာရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားလုံးလွှမ်းခြုံကုသတဲ့ ချည်းကပ်နည်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ကုသမှုတွေနဲ့ လူနာတစ်ချင်းစီအတွက် ရောဂါမန်နေဂျာတစ်ဦးစီ ထားရှိပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီမန်နေဂျာကတော့ လူနာတွေရဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ လူနာတွေရရှိနေတဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်ထားတဲ့ သူနာပြုတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရောဂါ မန်နေဂျာများ အကြောင်း ထပ်မံဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အသည်းနှင့် အစာခြေအင်္ဂါသိပ္ပံဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုလျှက်ရှိပါတယ်။ ထိုင်းလူမျိုးတွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက လူနာတွေကို အသည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ အစာခြေအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာမကျန်းဖြစ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် တိကျတဲ့ ရောဂါရှာဖွေမှုတွေ၊ အကောင်းဆုံး ကုသမှုအစီအစဉ် ပံ့ပိုးပေးဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ နှစ်ပေါင်းများစွာသော အတွေ့အကြုံတွေ ယူဆောင်လာပေးတဲ့ အထူးကုများပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ထားရှိထားပါတယ်။ Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီး ရဲ့ ဒုတိယထပ်မှာ တည်ရှိတဲ့ ဒီသိပ္ပံမှာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ၁၀ ဦး၊ သူနာပြု ၁၂ ဦး၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ ၄ ဦး၊ စမ်းသပ်ခန်း ၁၂ ခန်း၊ မှန်ပြောင်းကြည့်ခန်း ၅ ခန်းနဲ့ ခွဲစိတ်ပြီးလူနာခန်း ၁၀ ခန်းတို့ ပါရှိပါတယ်။
အောက်ပါတို့အပါအဝင် အသည်း၊ ပန်ကရိယ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းနဲ့ သည်းခြေအိတ်ရောဂါများနဲ့ အခြေအနေများ အားလုံးအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း –
အသည်းရောင်အသားဝါ (Hepatitis) အေ၊ ဘီ နှင့် စီ
နာတာရှည် သို့မဟုတ် သည်းခြေရည်စီးဆင်းမှု ယို့ယွင်းသည့်ရောဂါများ (cholestatic diseases)
အသည်းအတွင်း ပိုးဝင်ခြင်းများ (အသည်းပြည်တည်နာများ၊ စသည်)
ပင်မ နှင့် ပင်မ မဟုတ်သော အသည်းကင်ဆာ (Primary and non-primary liver cancer)
အစာအိမ်မှ အစာနှင့်အက်ဆစ်ဓာတ်လျှံတက်သည့်ရောဂါ (GERD)
အစာအိမ်ရောဂါ သို့မဟုတ် အူသိမ်ဦးအနာ (Gastric or duodenal ulcers)
နာတာရှည် အူသိမ် ရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါ (ဥပမာ၊ နာတာရှည်အူရောင်ရောဂါ (Crohn’s Disease)၊ နာတာရှည် အူမကြီးရောင်ရောဂါ (Ulcerative Colitis))
ပြင်းထန်နှင့် ရေရှည် ဝမ်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းချုပ်ခြင်း
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း အပေါ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အောက်ပိုင်း သွေးယိုခြင်း
ဒူလာလိပ်ခေါင်းရောဂါ (Hemorrhoids) နှင့် စအိုနှင့် အူမကြီးရောဂါများ (anorectal disorders)
အူတုန့်ပြန်မှုလွန်ကဲသောရောဂါ (IBS) နှင့် ထင်ရှားပြီး ရောဂါရှာမရသော နာတာရှည်ဗိုက်နာရောဂါ (FAPS) တို့ကဲ့သို့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း၏ လှုပ်ရှားမှု မူမမှန်ခြင်း (Motility disorders) (ဥပမာ- အစာပြွန်ကြွက်သားမူမမှန်၍ အစာမျိုရခက်ခဲသည့်ရောဂါ (Achalasia))
နာတာရှည် သို့မဟုတ် ပြင်းထန် ပန်ကရိယာရောင်ခြင်း(pancreatitis)
သည်းခြေကျောက် (Gallstones) နှင့် သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း (bile duct stones)
အစာအိမ်၊ အူမကြီး၊ အူသိမ်၊ အစာရေမျိုပြွန်၊ ပန်ကရိယနှင့် သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာ ပုံစံအမျိုးမျိုး
အောက်ပါတို့အပါအဝင် အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကို ကျယ်ပြန့်စွာ ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိပါတယ် –
ပုံရိပ်ဖေါ်ပြီး လေ့လာခြင်း (ဓါတ်မှန်၊ တီဗွီဓါတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်)
အသည်းခြောက်ခြင်းကို စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း အကျိတ်များ၊ သည်းခြေရည်ပြွန်တို့အတွက် လမ်းကြောင်းတွင်း မှန်ပြောင်းထည့်၍ ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ဗိုက်ဖေါက်ပြီး မှန်ပြောင်းထည့်၍ ခွဲစိတ်ခြင်း
အသည်းနှင့် အစာချေအင်္ဂါရောဂါများနှင့် မူမမှန်မှုများကို ခွဲစိတ်ကုသမှုအစား ဓါတ်မှန်နည်းဖြင့် ကုသခြင်း
ကင်ဆာကုသနည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကင်ဆာအလုံးအကျိတ်အတွင်းသို့ အယ်လ်ကိုဟော တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသည့် (PEI) နည်း
အသည်းသွေးလွှတ်ကြောကိုဖြတ်၍ ပြွန်ငယ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် ကင်ဆာအကျိတ်အတွင်းသို့ ဓါတုပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်ထိုးသွင့်သည့် ဓါတုကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည့် (TOCE)
အသည်းနှင့် အစာခြေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်ဖြစ်သော ပြင်းထန်သွေးယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဂျယ်အမြှုတ်သုံးသည့် (TAE)
ရေဒီယိုလှိုင်းကို အသုံးပြုသည့် အသည်းကင်ဆာ ကုသမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည့် (RFA)
သည်းခြေရည်ပြွန်တွင် ဖြစ်သော မူမမှန်မှုများကို တိကျစွာရောဂါရှာဖွေပြီး ဝမ်းဗိုက်တွင် ခွဲစိတ်ကုသသည့် အမာရွတ် မကျန်ဘဲ ကုသပေးသည့် မှန်ပြောင်းထည့်၍ သည်းခြေနှင့် ပန်ကရိယကို စစ်ဆေးခြင်း (ERCP)
အသည်း၊ သည်းခြေရည်ပြွန်နှင့် အစာခြေအင်္ဂါ ရောဂါများနှင့် မူမမှန်မှုများကို ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
အစာပြွန် ညှစ်အား စစ်ဆေးခြင်း
စအိုနှင့် အူမကြီး ညှစ်အားစစ်ဆေးခြင်း
စအိုနှင့် အူမကြီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
ခရုပတ် ကွန်ပျူတာ ဓါတ်မှန် (Spiral CT scan)
သံလိုက်ဓါတ်မှန် စက် (MRI)
ကျွမ်းကျင် ခွဲစိတ်အထူးကုများ အဖွဲ့၏ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ဗိုက်ဖေါက်ပြီးမှန်ပြောင်းထည့်၍ ခွဲစိတ်ခြင်း
ကျွမ်းကျင် အထူးကုဆရာဝန်များအဖွဲ့၏ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာရောဂါဗေဒ
အသည်းအကူကုထုံး သို့မဟုတ် အသည်းသန့်စင်ခြင်း
The Liver and Digestive Center 4th Floor
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၀၈၄-၅
The Liver and Gastroenterology Center 4th Floor
+၆၆၃၈-၃၂၀-၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၁၄၁၀-၂
Orsinee Ovatsatit, M.D.
Soranont Trytilanunt, M.D.
Parinya Vangtal, M.D.